प्रत्येक शहर मा आफ्नो पहिचान हो कि ठाउँहरू छन्। मास्को मा त्यहाँ एक विशाल संख्या हो। रंगीन Boulevard - यस्तो ठाउँमा बीचमा। त्यहाँ शहर को Muscovites र अतिथि गएर धेरै रुचाउनु हो भनेर रेस्टुरेन्ट को एक धेरै छन्। के तिनीहरूले कडा धेरै पर्यटकहरू ध्यान आकर्षित छन्? को रंग Boulevard मा सबै भन्दा प्रसिद्ध रेस्टुरेन्ट के हुन्? यो के आगंतुकों भन्न?
को रंग Boulevard बारेमा रोचक तथ्य
सम्म मध्य-19 औं सताब्दी पाइप भनिन्थ्यो।
कारण रंग Boulevard एक विशाल संख्या बनाइएको थियो भन्ने तथ्यलाई गर्न पबहरूमा को, हामी संदिग्ध व्यक्तित्व यहाँ भेला भए।
देर 19 औं सताब्दी मा, प्रसिद्ध मास्को सर्कस निर्माण र यहाँ खोलिएको थियो। त्यसपछि, यो townspeople को मनपर्ने स्थानहरूको एक।
Valeriy Bryusov - यहाँ त्यो चाँदी आयु को सबै भन्दा प्रसिद्ध कवि को एक बस्थे।
को रंग Boulevard मा रेस्टुरेन्ट को विशिष्ट सुविधाहरू
सबै प्रतिष्ठानबाट मास्को मा सबै भन्दा लोकप्रिय गन्तव्यहरू मध्ये अवस्थित छ।
को रंग Boulevard मा रेस्टुरेन्ट - यो सधैं विनम्र र अनुकूल कर्मचारी छ।
प्रत्यक्ष संगीत धेरै प्रतिष्ठानबाट मा।
मेनुमा व्यञ्जन एक ठूलो विविधता।
हरेक ग्राहक व्यक्तिगत दृष्टिकोण।
त्यहाँ हरेक स्वाद र धन अनुरूप स्थानहरूको एक विकल्प छ।
को रंग Boulevard मा सबै भन्दा प्रसिद्ध रेस्टुरेन्ट
यस्तो प्रतिष्ठानबाट को ठूलो संख्या बीचमा हामी मात्र आगन्तुकहरूलाई लोकप्रिय छन् कि ती चयन गर्नुभएको छ। सेवा र राम्रो समय को गुणवत्ता - मुख्य चयन मापदण्ड।
रेस्टुरेन्ट को रंग Boulevard मा "Valenok"। यो स्थान द्वारा पारित गर्न सक्षम हुने छैन। बारेमा छ मीटर - सम्पत्ति गर्न प्रवेश नजिकै एक विशाल जूता आफ्नो उचाइ छ। उहाँलाई अर्को फोटो खिंचवाने वा भित्र जान सकिन्छ। रेस्टुरेन्ट नै धेरै राम्रो वातावरण छ: बर्तन र टब मा साग वरिपरि, पर्खालहरु मा प्लाज्मा स्क्रीन, टेबल विभाजित। सूप, पकौडी, घर चाउचाउ: यहाँ खाना धेरै सरल छ। तर, यसको स्पष्ट सादगी बाबजुद अत्यन्तै स्वादिष्ट। धेरै आगंतुकहरुलाई मिठाईहरू बारेमा रेभ। उत्कृष्ट केक "नेपोलियन", एक नाजुक तर, स्वादिष्ट pecan पाइ एउटा स्वादिष्ट meringue। तपाईं बच्चाहरु संग यहाँ आउन भने, मनोरञ्जन कार्यक्रम तिनीहरूलाई लागि प्रदान: विभिन्न कार्यशालाओं, akvagrim, खेल मैदान। 100 rubles र माथिबाट संस्थाले मा मूल्यहरु।
रेस्टुरेन्ट "प्लग" को रंग Boulevard मा। तपाईं एक छिटो र स्वादिष्ट खाजा चाहनुहुन्छ भने, यो तपाईं के आवश्यक छ ठीक छ। एक धेरै नै सरल नामको इटालियन रेस्टुरेन्टमा उज्ज्वल र स्टाइलिश अक्षर छन्। यहाँ सादगी को शान र सान्त्वना stylishness संग आसन्न छ। तपाईं विशेष अवसर मनाउन वा रोमान्टिक मिति खर्च गर्न यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। स्टाइलिश भित्री बीच तपाईं सजिलो महसुस हुनेछ। पनि सानो आगंतुकों शिष्टतासाथ यहाँ व्यवहार गर्नुपर्छ, यो भ्रमणको अवस्थाको छ। एक रेस्टुरेन्ट को hallmarks को - हल को बीचमा छ खुला भान्सा। प्रत्येक आगन्तुक कुनै पनि पकवान कसरी तयार हेर्न सक्नुहुन्छ। औसत चेक 1500 rubles हो।
रेस्टुरेन्ट "उज्बेकिस्तान" तपाईं पूर्वी शासकहरूले एक वास्तविक दरबारमा प्राप्त गर्ने भावना छ। यो वातावरण एक धनी भित्री, मूल आभूषण संस्थाहरू र डान्सरहरू प्रदर्शन पेट नृत्य द्वारा सिर्जना गरिएको छ। तपाईं एक विशेष अवसर को लागि ठाउँ खोजिरहेको छ भने, रेस्टुरेन्ट "उज्बेकिस्तान" आउँछन्। यहाँ एक पटक भन्दा बढी आउन छ गर्न उज़्बेक भोजन र पूर्वी, स्वाद हुक्का र मादक पेय को एक विस्तृत चयन को स्वादिष्ट व्यञ्जन। मूल्यहरु धेरै उच्च छन् भन्ने तथ्यलाई बावजुद: 1000 rubles र माथि देखि, खर्च गर्ने पैसा छैन दु: खी छ।
रेस्टुरेन्ट को रंग Boulevard मा "द्वारा पूछे जाने"। यो मास्को को सबै भन्दा राम्रो संस्थाहरू मध्ये एक हो। स्वादिष्ट खाना र एक सुखद कुराकानीको लागि एक सुन्दर सेटिंग। तपाईं पलङ्गमा बस्न र लामो कुराकानी कायम राख्न सक्छौं। उत्पादन आर्मेनिया छुटकारा रेस्टुरेन्ट मा।
मेनु र मूल्यहरू
इटालियन रेस्टुरेन्ट "ट्यूब" तपाईं पक्कै पनि निम्न व्यञ्जन प्रयास गर्नुपर्छ:
950 rubles - बाछो गाल Risotto।
राजा केकडा संग Makaronchini - 990।
1900-2000 rubles - कालो truffles संग पिज्जा।
को रूसी भोजन रेस्टुरेन्ट "Valenok" पहिलो प्रयास नगरी छोड्न हुँदैन:
चिकन को Skewers - 450 rubles।
Borsch - 300।
घरेलु पनिर संग पकौडी - 350 rubles।
रेस्टुरेन्ट "उज्बेकिस्तान" तपाईं प्राच्य मिठाई को एक विशाल चयन दिनेछु। मूल्यहरु - प्रति 200 ग्राम 500 rubles देखि।
प्रत्यक्ष संगीत संग रेस्टुरेन्ट
को रंग Boulevard मा, भवन 30, त्यहाँ एक क्याफे "grouse को गुँड" छ। यहाँ हरेक साँझ प्ले र गितार संग गीतहरू गाइरहेका। पर्यटकहरू नियम, नियमित ग्राहकहरु को संख्या, धेरै छैन। जहाँ तपाईं एक स्वादिष्ट र सस्तो खाना हुन सक्छ। युरोपेली र रूसी भोजन को भाँडा बाहेक, एक शाकाहारी मेनु प्रदान गर्दछ।
, प्रत्यक्ष संगीत को टेबल र unbridled आनन्द मा नाच: रेस्टुरेन्ट "कर्क" हरेक रात तपाईं को लागि प्रतीक्षामा छ।
"बुद्ध-पट्टी" तपाईंको ध्यान एक शानदार भित्री, सुखद छाया र संगीत को एक अद्वितीय शैली आकर्षित हुनेछ।
को रंग Boulevard मा, 26 निर्माण, स्थित छ रेष्टुरेन्ट "मसला र आनन्द।" एक संस्थाले को लाभ को - यो 8.00 साथ सुरु हुन्छ भन्ने तथ्यलाई। यहाँ सबै भन्दा फैशन बैंड र संगीतकार हुन्।
जो सबै भन्दा लोकप्रिय हुन् को प्रस्ताव,:
हप्तादिन मा, 11.00 देखि 16.00 भोजनालय गर्न "जाम" आगंतुकों कुनै पनि व्यञ्जन मा एक 20% छुट दिन्छ।
यस बालिका लागि सुखद आश्चर्य। मङ्गलबार, 19.00 पछि रेस्टुरेन्ट "मसला र आनन्द" तपाईं सम्पूर्ण मेनु मा एक 15% छुट आशा।
को रंग Boulevard मा रेस्टुरेन्ट - यो सधैं राम्रो सेवा र स्वादिष्ट, वैविध्यपूर्ण मेनु छ। यो रूपमा प्रारम्भिक बिहान आएको र राती लेट सकेन।
धेरै लोकप्रिय रेस्टुरेन्ट "Valenok" को रंग Boulevard मा। मेनु वयस्कहरूको लागि मात्र होइन तर पनि छोराछोरीलाई लागि व्यञ्जन समावेश छ। त्यसैले, युगल अक्सर यहाँ ड्रप।
रेस्टुरेन्ट "कर्क" जवान मानिसहरू बीच लोकप्रिय छ। त्यहाँ धेरै छिटो सेवा र स्वादिष्ट खाना छ कि बाहेक, सबै भन्दा Incendiary दल पनि पास। मास्को मा Tsvetnoy Boulevard मा आएर गाह्रो छैन गर्नेछ यहाँ आफ्नो रुचि को रेस्टुरेन्ट चयन गर्नुहोस्। तालिका कारण पर्यटक ठूलो संख्यामा, अग्रिम बुक गर्नुपर्छ, उपलब्धता हुन सक्दैन।
इटालियन छुट्टी लागि स्थान - रेस्टुरेन्ट "ट्यूब" (सेन्ट पीटर्सबर्ग)
"Dantes" - कसाई, 13 मा रेस्टुरेन्ट: संस्थाहरू एक सिंहावलोकन
बेलग्रेड सबैभन्दा लोकप्रिय रेस्टुरेन्ट
किन महिला मा aching छाती: कारण
मानव हात को औंलाहरु को नाम जहाँ गरे?
चिकन संग कलेज बाट पुलाव: पाक कला व्यंजनहरु
स्थायी स्थापना संग परिपत्र देख्यो मार्गदर्शन: कसरी चयन गर्ने? अतिरिक्तका